मतदाताको चिन्ता, कसरी मत हाल्ने ? यस्तो छ भोट हाल्ने तरिका हेर्नुहोस ।
बेसीशहर । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि चयनका लागि मतदान गर्न अब ९ दिनमात्र बाँकी छ । तर, धेरै मतदातालाई अझैसम्म कसरी मतदान गर्ने भन्नेमै अन्योल छ ।
-अनलाइनखबर डट. कम.मा खबर छ ।